Gallery – Maskandi Media
COVER PHOTO AND MORE
BREAKING MASKANDI NEWS AND UPDATES!!
Lapha uzothola izindaba ezishisayo noma ezihamba phambili ngalelo sonto, uphinde uthole izimemezelo kanye nakho konke okuzobe kusematheni ngalelo sonto. Bese uziwashela amehlo ngezithombe zabaculi obathandayo kanye nezabalandeli bomculo abagqoka kahle abazithandayo nabathanda amanzi.
Izinkulumo zabaculi nezimemezelo
UMajotha uthembisa enkulu ingoma
Emveni kokuzwa icwecwe elillodwa, single track kaMajotha, bathokoze.
Abalandeli asebezitholele leli cwecwe elisanda kuphuma abawuvali umomo bencoma ubuciko
Akafunanga ukuphawula ngalokho kodwa uthe uzomemezela uma sekukhona izinguquko nom
Bathokozile ngamaNguni Amahle
Buka nje umfoka Khuzwayo uyeke lento yokuthukana nabaculi washaya ingoma
Lishaye udaka Igcokama
Lo mshophi wokuhambela ubala ezweni elikude njengkapa lodumo lehlele abantu abaningi emculweni kaMaskandi. UKhuzani umfoka Mpungose uzithole esethola into akazohlekisa ngayo isonto lonke kwazise ubengayile yena lapho. “Cha mina angihleki muntu bengizishuthela nje isithombe ngisebhanoyini ngazisa abantu ukuthi kunezinto okumele uzijwayeze ukuzibheka ngaphambi kokuba uzigijimele”. “Lolu hambo lwaseKapa beluluhle kakhulu ukube alumoshwanga umhleli womcimbi. Ukuhleka into esazalwa ikhona futhi soze sife siyishiye. Angisho ukuthi ngihleka ngoba behambele ubala ngichazwa ukuthi lolu hambo nami bengingaya kulo kodwa ngathi no”.
“Ngizwa nginokubadabukela laba abathi bazokwazi ukumelana nami kulo live engifuna ukuyobhubhisa ngawo laphana. Mfoka Mcineka zidedele ndoda ziqhuthane amakhizane ngoba kade zafunana. Uyabona kulokhu ngifuna kujaje ngisho encane ingane ngoba vele ngeke bengenze lutho ngokuba nabalandeli abaningi”. “Yayisho uma seknjenake Indidane ithi ‘Abazame okunyeee, Ehe!’. Nami ngisho njalo ke manje qhawe lami ngithi la owangibeka khona kuyashisa kodwa nginawo futhi maningi amanzi okucisha lowo mlilo. KwiMpucuzeko kuzocaca ngoba ngiyezwa kunendoda engifuna iqhude”. “Angisho kabi kodwa ngithi nongayidli inja uyolala eyidlile ngempelake kulokhu ngoba angithetheleli ngishaya ingoma kuphela plus ngiyazizwa ngivuthiwe ku-live”.
Umehlulile futhi u-live
LUkube bukhona ubulungiswa emculweni ubezolalelwa uMajotha uma ethi alikhishwe Igcokama ngoba akuzi kahle uma sekumele lishaye live. Lento esiyibukiswe laphayana sibe sikhokha
UShwi unxusela iHlanganani
Nginxusa kubathandi bomculo wesintu ukuthi bengayifeli amathe iHlanganani ngoba iyafana lemkhakha
Ufisa ukuqashwa uBobo
Umculi kaMaskandi osenesikhathi ekhona kule ndima akanelisekile ngezinga lokuqashwa emcimbini kaMaskandi
Bawucima ngoParaffin abakaMgqumeni
“Sidlulisa ukubonga kubo bonke abancomayo nabagxekayo ngoba phela vele sisebenzela abantu ibona abasikhuthazayo”
Igcokamelisha liphusha uMacekeceke
“Inhloso yami nesifiso sami ukubona oMshovo belikhipha leli cwecwe ngenkulu impumelelo bese ngikhipha nevideo
“Ngisezinhlelweni zokusiza oMshovo ukuthi bavelele nabo njengami. Angifisi ukuthi lezi nsizwa zigcine zingaziwanga kule ndima…
Uzoshaya ingoma uMdumazi
Zevile eshumini nesithupha enginazo kanti zonke zishaya esikhonkosini. Ngizokhetha zibe lishumi nanhlanu kuphela bese ..
SETHEMBE USATHOKOZILE NGOKUTHOLA KULELI KHASI LETHU ESIFISA UKUTHI UTHOLE KULO IZINDABA EZENZEKA EMCULWENI